DKMG ah oo taaktiik Milatari oo dhagar ah ka sameysay difaacyada Muqdisho iyo Saraakiisha Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo xeelad kale kaga jawaabay. | Halganka Online
DKMG ah oo taaktiik Milatari oo dhagar ah ka sameysay difaacyada Muqdisho iyo Saraakiisha Ciidamada Shabaabul Mujaahidiin oo xeelad kale kaga jawaabay.
DKMG ah oo mowtka kula hardameysa sariirta ayaa ku dhaqaaqday tallaabo Milatari oo xeelad dagaal ay ku damacsanaayeen kaasi oo ay ka sameeyeen difaacyada la isku horfadhiyo ee Muqdisho, halka Hogaanka Ciidanka Shabaabul Mujaahidiin ay iyana jawaab ka bixiyaan.
Saraakiisha Milatariga ee DKMG ah oo doonaya in ay xoojiyaan nafsaaniyadda maleeshiyadooda ayay ku dhaqaaqeen in ay ciidamada u kala badalaan difaacyadi ay mudada sanadka ku dhaw fadhiyeen ayna isaga horjeedeen xoogaga Islaamiga.
Maleeshiyadii ku sugneyd difaaca C/Caziiz ayay usoo rareen difaacyadooda Shibis Iyo Boondheere halka kuwii ku sugnaa Shibis ay geeyeen degmada Kaaraan, waxaana sidaasi oo kale ay ka sameynayeen difaacyadooda Hodon iyo Howlwadaag.
Warar ayaa sheegaya in difaacyada qaarkood oo aad u kala halis badan ay DKMG ah dooneysay in ay ku tashato iyadoona Maleeshiyada DKMG ah u caal waayeen xoogag Islaami ah oo si dhuumaaleysi ah difaacyadooda ku taga oo askar kaso dila si maalinle ah ugu yaraan.
Hogaanka Ciidanka Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ee Muqdisho ayaa xeeladdaasi dagaal kaga jawaabay in maleeshiyadii la keenay difaacyada weeraro gaadmo ah iyo ugaarsi isdaba joog ah laga wada sameeyo dhamaan difaacyada, si maleeshiyaadkii la badalay aysan u nasan oo dhinac waliba ay u dareemaan dhibaato aysan hore u qabin.
Maleeshiyaadkii la geeyay difaaca Kaaraan oo ah goobta ugu halista badan ayaa qaati ka taagan weeraro gaadmo ah oo maalin waliba lagu qaado oo askar looga soo dilo, taasi oo keentay in ay difaacooda sii dheereeyaan oo ka baxaan kii hore, halka difaaca Darjiinka aan xog ku helnay in shalay ay ugu danbeysay dilka askari halka dhawaan nin laga dilay maleeshiyada DKMG ah uu meydkiisa in muddo ah iska yaallay goobaha la isku horfadhiyo.
Xoogaga Islaamiga ah ayaa maalin waliba sameeya waxay u yaqaanaan ”Xilliga Ugaarta” oo koox kamid ah ay difaacyada Maleeshiyaadka ugu dhacaan halkaasi oo dilal loogu geysto maleeshiyada, arrinkaasina marnaba ma sameeyaan Maleeshiyada dawladda kuwaasi oo xilliyada qaar cabsi darteed habeenki kaliya soo gala difaacyada maalintiina aad kaga dheeraada meelihii lagu ogaa.
Xeeladda dagaal ee DKMG ah ay sameysay ka sokow in Saraakiisha Ciidamada Islaamiyintu ay garteen hadane waxay dhibaato ku tahay maleeshiyaadkii la kala badalay kuwaasi oo meelihii la geeyay iyana ku dhibateysan sababo ku aadan weerarada gaadmada ah.
« Barre Cali Barre oo in la weeraray sheegay iyo shakki weyn oo soo baxaya( Xog ku aadan dhacdadaasi). Xaalad kacsanaan leh oo saaka ka taagan magaalada Laas Caanood xilli wali ay xiran yihiin Ducaaddii iyo Macallimiinta. »